अष्ट्रेलिया जाने सोचमा हुनुहुन्छ ? यस्तो छ उड्ने प्रकृया (भिडियोसहित) | Kendrabindu Nepal Online News
अष्ट्रेलिया जाने सोचमा हुनुहुन्छ ? यस्तो छ उड्ने प्रकृया (भिडियोसहित)
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने नेपाली युवाहरुको रोजाई बनेको छ अष्ट्रेलिया । तथ्याङ्कहरुलाई आधार मान्ने हो भने विदेशबाट अष्ट्रेलियामा पढ्न जाने देशका विद्यार्थीहरुको संख्यामा नेपालीहरु तेस्रो स्थानमा छन् ।
अष्ट्रेलिय उच्च शिक्षा अध्ययनका मात्रै होइन् मिहेनती विद्यार्थीहरुका लागि, पैसा र भविष्य पनि उत्तिकै उज्जल छ । अन्तराष्ट्रिय शिक्षाको आवश्यकता र महत्वसँगै प्रभावकारिता पनि बढ्दै गएको हुँदा विदेश अध्ययनका लागि युवाहरुमा आकर्षण बढीरहेको अवस्थामा पनि कुन देश जाने ? कस्तो युनिभर्सिटीमा भर्ना हुने ? फि कति लाग्छ ? प्रकृया के भन्ने विषयमा अन्यौलता उस्तै छ ।
यति मात्रै होइन् त्यहाँ पुगिसकेपछि पनि उनीहरुले विभिन्न समस्याहरुको सामाना गरिहेका हुन्छन् । यदि तपाई पनि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया जाने सोचमा हुनहुन्छ भने त्यसका लागि प्रकृया के कस्तो हुन्छ ? भन्ने कुराहरु बुझ्नु आवश्यक छ ।
अष्ट्रेलिया जानका लागि के कस्तो प्रकृया अपनाउनुपर्छ विस्तृतमा हेर्नुहोस् यो भिडियो
Prevकुन टिममा कति आप्रावासी खेलाडी छन्
विद्यार्थीको लागी लाभदायी ‘इक्यान एजुकेशनल फेयर’ (भिडयोसहित)Next